Xukuumadda Soomaaliya oo xaqiijisay in walxo qarxa loo adeegsaday Diyaaradda Daallo Airline – STAR FM SOMALIA
Taliyaha Ciidamada Booliska Soomaaliya Jen, Maxamed Sheekh Xasan Xaamud ayaa sheegay in maado qarax loo adeegsaday, isagoo xusay in baaritaanka uu qaatay muddo, ayna u kala qaadeen labo nooc, isagoo xusay inay arrintan ay aheyd fal argagixiso.
Dhinaca kale Wasiirka Gaadiidka Cirka iyo Duulista Hawada ayaa ka gaabsaday inuu cadeeya waxa ay tahay qaraxa loo adeegsaday diyaarada, isagoo xusay inay dib ka soo sheegi doonaan waxyaabo kale, maadaama uu wali socdo baaritaanka.
Wararka ayaa sheegaya in walxo qarxa oo la soo geliyay Laptop loo adeegsaday, iyadoo laamaha ammaanka dowladda ay arrintan u xir xireen dad dhowr ah oo ay ku jireen saraakiil ka shaqeynayay Garoonka diyaaradaha.
Nin 55 jir ah oo ka mid ahaa rakaabkii diyaaradda, kaasoo diyaaradda ka dhacay, meydkiisana laga helay agagaarka degmada Balcad, ayaa la tuhunsan yahay inuu ka dambeeyay weerarka, kaasoo goor dhoweyd dowladda Soomaaaliya magaciisa shaacisay.
Rakaabkii saarnaa diyaaradda Daallo ayaa ahaa rakaab ay laheyd diyaarada Turkish Airways oo labo maalmood baaqatay, kadib markii arrimo amni dib ugu dhacday sida ay xaqiijiyeen ilo ku sugan garoonka.
Labo ruux oo ka mid ahaa rakaabkii diyaarada ayaa ku dhaawacmay qaraxa ka dhex dhacay gudaha Diyaaradda.
Diyaaradda Daallo ayaa deg deg dib ugu soo laabatay garoonka diyaaradaha, markii 30-daqiiqo hawada ku jirtay, waxaana diyaarada soo degtay, iyadoo uu ka muuqday duleel weyn